Ireo mpampiasa IPhone 13 dia mitatitra ny lesoka rehefa mamoha amin'ny Apple Watch | Vaovao IPhone
Ireo mpampiasa IPhone 13 dia mitatitra ny lesoka amin'ny famohana Apple Watch
Angel Gonzalez | 25/09/2021 18:00 | iPhone 13, About us
Ny fahatongavan'ireo Covid-19 nitondra fiovana maro teo amin'ny fiainantsika isan'andro izy io. Ny iray amin'izy ireo dia ilay sarontava izay niaraka taminay hatramin'ny nanombohan'ny valanaretina. Saingy, io fitaovana io dia nametra hetsika sasany izay fanaonay isan'andro, toy ny mamoha ny iPhone amin'ny Face ID. Tamin'ny volana aprily, Apple dia nanangana rafitra mamoha amin'ny alàlan'ny Apple Watch amin'ny alàlan'ny fanodinana ny Face ID amin'ny fampiasana rafitra fanamarinana faharoa. Ireo mpampiasa ny iPhone 13 vaovao dia mitatitra olana rehefa mampiasa an'io fampiasa io ary Apple dia mety hamoaka fanavaozana tsy ho ela mba hanamboarana azy.
Fahadisoana hanalana ny iPhone 13 amin'ny Apple Watch
Vohay ny iPhone amin'ny Apple Watch rehefa mitafy hoditra. Rehefa manao sarontava sy Apple Watch ianao dia afaka manainga sy mijery ny iPhone hamaha azy. Ianaro ny fomba hananganana sy hampiasana an'ity endri-javatra ity.
Ny tanjon'ity rafitra mamoha mazava izany: aza atao ny mampiasa Face ID hamaha ny terminal. Ho an'ity, Apple dia tsy maintsy nanana rafitra fiarovana ivelany hanamafisana fa isika no hamoha ny iPhone. Ary eo no nidiran'ny Apple Watch izay mahazo fampandrenesana rehefa manandrana mamoha ilay fitaovana. Aorian'ny fanamafisana dia miditra amin'ny solaitrabe isika fa tsy mila manala ny sarontava.
Amin'ny ora farany mpampiasa ny iPhone 13 vaovao manana olana amin'ny fampiasana an'io endri-javatra io. Rehefa manandrana mamoha amin'ny Apple Watch izy ireo dia mahazo hafatra diso:
Tsy afaka mifandray amin'i Apple Watch. Hamarino tsara fa tsy voahidy ny Apple Watch ary eo an-tànanao, ary ny iPhone voavaha.
Ahoana ny fomba hamohana ny iPhone amin'ny sarontava sy Apple Watch
Amin'ny alalan'ny Reddit ny mpampiasa sasany dia nahavita nahatakatra ny anton'ity lesoka ity. Heverina fa ny iPhone 13 dia mamorona lakile fanalahidy rehefa manomboka ny dingana ary alefa any amin'ny Apple Watch hamaha ny terminal mampiasa io lakile io. Na izany aza, atsipy io lesoka io satria iPhone 13 dia tsy afaka mamorona ny lakile fanalahidiny ary malemy ny fiasa ary tsy misy ny fifandraisana eo amin'ireo fitaovana roa ireo.
Mety mila mamoaka kinova iOS 15 nohavaozina i Apple mba hamahana ity olana ity. Azo inoana fa raha avy any Apple izy ireo dia mihevitra fa tsy maintsy vahana haingana araka izay tratra dia handinika ny fandefasana ny iOS 15.0.1 izy ireo. Raha tsy izany dia miandry ny kinova iOS 15.1 izy ireo izay hamerina fiasa sasany toy ny SharePlay izay nesorina tamin'ny dingana farany an'ny betas developer.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Ireo mpampiasa IPhone 13 dia mitatitra ny lesoka amin'ny famohana Apple Watch
Darth koul dia hoy izy:
Manana olana mitovy amin'izany aho. Efa niandry fanavaozana aho.
Valiny tamin'i Darth Koul
Mitranga amiko izany miaraka amin'ny pro pro 13
Esteban Gonzalez dia hoy izy:
Izaho dia iray amin'ireo voakasik'ity olana ity. Manantena aho fa hamaha azy ireo haingana izy ireo, tsy ekena fa ity karazana tsy fahampiana ity dia miseho amin'ny fitaovana iray amin'ity vidiny ity.
Valiny tamin'i Esteban González
Jesús R. dia hoy izy:
Manadala antsika izy ireo. Tonga lafatra ny famindrana iray manontolo, afa-tsy ilay Movistar eSIM izay
Mampandeha anao hamaky ilay boaty foana izy ireo, ary ny fisokafany amin'ny sarontava izay mahadomelina anay.
Valiny tamin'i Jesús R.
Namaha azy aho tamin'ny famerenana amin'ny laoniny ny iPhone ary aorian'ny famerenako azy ho iPhone vaovao sy ny famoahana ny nomaniny ho solon'izay, izany rehetra izany dia nanampy an'i Apple ary mandeha tsara ho ahy izy io manana iPhone 13pro aho
Guillem dia hoy izy:
Tsy avelako hanamboatra azy io koa aho mba hamaha ny Mac. Fahadisoana mitovy ihany no azoko.
Mamaly an'i Guillem
Tsy navelako niaraka tamin'ny IPhone 13 koa aho !!!! Efa nanandrana ny zava-drehetra aho, mamerina, mamafa, mamerina manamboatra ireo fitaovana roa ary tsy misy
Ny fitsapana bateria IPhone 13 Pro dia mampiseho fotoana maharitra